Amathrendi nokuseshwa kwama-athikili endabeni:blockchain
I-druckenmiller ne-loeb support $ 70 million ukukhulisa i-bitwise
IBitwise Asset Management - inkampani yokutshala imali ye-crypto enezimpahla ezingaphansi kuka- $ 1.2 billion ezizama ukungena embonini yezeluleki yezezimali engamadola ayizigidigidi ezingama-20 - ithole imali engamaRandi ayizigidi ezingama-70 ngenani elingama- $ 500 million, kusho uCoinDesk. yayiho
Izinto ezi-3 okufanele uziqaphele ngaphambi kokubiza isikhwama se-bitcoin
Njengoba i-bitcoin ibona izimpawu zokuphila ngemuva kwenyanga efile amathemba, ochwepheshe baxwayisa ukuthi kungenzeka kusesekuseni kakhulu ukuthi kubizwe ukuthi kuqalwe kabusha ukugijima kwenkunzi. Amaviki angu-2,5 ngenhla kwama- $ 40,000 ekuqaleni kukaLwesibili, ngemuva kokuthola amadili asondele
I-umee inyusa u- $ 6.3 million wokuxhuma i-cosmos ne-ethereum nge-crosschain challenge
Ezezimali ezisetshenzisiwe (i-DeFi) emhlabeni onamaketanga amaningi ikhona kuma-silos. Iphrojekthi entsha iletha abaxhasi abasezingeni eliphezulu ukubhekana nalolu daba. Emenyezelwe ngoLwesibili, u-Umee uqokelele imali eyizigidi ezingama- $ 6.3 eyayiholwa yiPolychain Capital futhi ihlanganisa neCoin
Ibhange laseSwitzerland le-sygnum lithatha inselelo
I-Swiss bank Sygnum yethula ukugcinwa nokuhweba ngezinhlobo zamathokheni ezehlukene ezezimali (DeFi) afaka phakathi i-aave, aragon, curve, maker, synthetix, uniswap kanye ne-1inch network. uhlu lwemikhiqizo edala inzuzo kumakhasimende alo, okubandakanya amabhange, ama-hedge funds, abaphathi bempahla
Paul brody: isikhathi samaketanga wokuhlinzeka ngokuzimela
Sihlanganisa umqondo wokuhlelwa okuphakathi nezithombe ezimnyama zokuwa komnotho waseSoviet, kepha kuvela ukuthi ukuhlela okumaphakathi kuyiyona njini enkulu yokuthi iminotho yongxiwankulu yesimanje isebenza kanjani - okungenani ngaphakathi enkampanini. , Yize mhlawumbe inethrekhi engcono Njengoba k